थाहा खबर: नर्सिङ क्षेत्रको सुधारका लागि प्राध्यापन पेसा त्यागेर अनशन
नर्सिङ क्षेत्रको सुधारका लागि प्राध्यापन पेसा त्यागेर अनशन
काठमाडौं : केही वर्षयता स्वास्थ्य क्षेत्रको बेथिति अन्त्य गर्ने भन्दै पटकपटक गरी १६ औँ पटकसम्म प्राडा. गोविन्द केसी अनशन बसे। उनको अनशनले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा केही भए। अहिले प्राडा. केसीको पदचापलाई पछ्याउँदै पोखराकी नर्स जिता बराल १३ दिनदेखि आमरण अनशनमा छिन्। नर्सिङ पेसामा भएको बेथितिलाई अन्त्य गर्न भन्दै अनशन थालेकी हुन्।
बिपी स्मृति अस्पतालको तेस्रो तल्लामा रहेको बेड नम्बर ३ सय २६ मा १३ दिनदेखि अनशनरत छिन् जिता। नेपालमा नर्समाथि श्रमशोषण भएको, राम्रो नर्सिङ नीति नहुँदा पेसा नै असुरक्षित यस क्षेत्रमा देखिएको बेथितिको अन्त्यका लागि आफू अनशन बसेको उनी बताउँछिन्। ‘गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको लागि नर्सहरूको सेवा महत्वपूर्ण मानिन्छ', उनले भनिन्, 'तर, यिनै नर्सको पेसा सुरक्षित छैन। धेरै नर्सहरूमाथि चरम श्रमशोषण भइरहेको छ। यस्ता विकृति अन्त्यका लागि म अनशन बसेकी हुँ।'
अनशननै किन त?
गत वैशाख २७ गते नेपाल नर्सिङ संघको केन्द्रीय कार्यालय परिसरबाट अनशन बसेकी नर्स बराल पटकपटक आफूले नर्सिङ क्षेत्रको सुधारका लागि पहल गरेको बताउँछिन्। आफ्नो मागको सुनुवाइ नभएपछि अनशन बस्न बाध्य भएको उनको भनाइ छ। ‘८४ हजार नर्समा १५ सयबाहेक सबै प्राइभेट अस्पतालमा काम गरिरहेका छन्। जहाँ उनीहरू ५/६ हजारमा १२ घन्टा बढी काम गर्न बाध्य छन्' उनले भनिन्।
विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार सघन उपचार कक्षमा एक बिरामीबराबर एक नर्स हुनुपर्ने, जनरल वार्डमा एक नर्स बराबर ८ बिरामी हेर्नुपर्ने उल्लेख छ। तर, नेपालमा भने एकजना नर्सले ५० बढी बिरामी हेर्नुपर्ने बाध्यता रहेकोले बिरामीले समेत राम्रो सेवा नपाएको उनको गुनासो छ।
उनले भनिन्, ‘बिरामीले नर्सहरूबाट पाउने सेवा गुणस्तरीय पाएका छैनन्, जसको मुख्य कारण नै एक जना नर्सले धेरै समयसम्म धेरै बिरामी हेर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको हो।'
​के हुन् बरालका माग?
अनशनको १३ दिनसम्म आइपुग्दा बरालको स्वास्थ्य अवस्था नाजुक बन्दै गएको उनका सहयोगीहरूले बताएका छन्। हाल उनलाई खुट्टा बाउँडिने, रिंगटा लाग्ने, छाती दुख्ने तथा मुटुको चाल कम हुने जस्ता समस्या देखिएको बताइएको छ। यद्यपि आफ्ना माग पूरा नभएसम्म अनशन नतोड्ने उनले बताउँदै आएको छिन्।
विशेषतः नेपालमा ८५ हजर नर्सिङ जनशक्ति उत्पादन गरी अव्यवस्थित नर्सिङ सेवालाई विश्व स्वास्थ्य संगठनको नीतिअनुसार नेपाल सरकारले अविलम्ब लागू गर्नुपर्ने, नेपालमा नर्सहरू मात्र उत्पादन गर्ने उच्च शिक्षा भएको हक विभेदलाई हटाई अरू जनशक्तिसरहको शैक्षिक सुविधा, अवसर, तालिम प्रादन गर्नुपर्ने उनका माग छन्।
त्यसैगरी, नर्सलाई भोकोपेट काम गराई मानसिक, सामाजिक र संवेगात्मक शोषणसहित चरम आर्थिक शोषणको अन्य गरिनुपर्ने, नर्सको उत्पादनको योजना र उत्पादित जनशक्तिलाई उचित व्यवस्थापन गरी सम्मानजनक सेवा गर्ने सुरक्षासहितको वातावरण सिर्जना गराउने, शैक्षिक कार्यक्रम र नर्सिङ सेवाको गुणस्तरीयतामा कुनै पनि सम्झौता नगर्नेजस्ता आफ्ना मुख्य माग रहेका छन्।
को हुन् बराल?
स्याङ्जा स्थायी घर भएकी बराल चितवन मेडिकल कलेजबाट नर्सिङको पढाइ पूरा गरेकी थिइन्। लामो समयसम्म बिपी स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठानमा क्लिनिकल नर्सका रूपमा रहेर पोखरा मणिपालबाटै स्नातक तहको अध्ययन पूरा गरेकी नर्स बराल नेपाल नर्सिङ संघकी आजिवन सदस्यसमेत हुन्।
विगत ११ वर्षदेखि पोखरामा रहेको फिस्टेल नर्सिङ क्याम्पसकी प्रमुख तथा प्राध्यापक थिइन्। तर, नर्सिङ क्षेत्रको सुधार गर्ने भन्दै आफ्नो प्रधाध्यापक पेसाबाट राजीनामा दिएर हाल नर्सिङ क्षेत्रमा व्याप्त बेथिति, विसंगतिविरुद्ध सुधारको अभियान सुरु गरेकी हुन्।